Coinbase enyekwara Earn.com - Blockchain News
Cryptocurrency mgbanwe Coinbase ka a mara ọkwa nnweta nke Earn.com, kọrọ for $ 120M.
Earn.com, otu n'ime ndị ụlọ ọrụ ahụ kasị mma kwụrụ ụgwọ startups, na mabu dị ka 21 Inc. efehe a Bitcoin Ngwuputa ọrụ, kwadoro site na nkà na ụzụ si Intel, na mgbe e mesịrị ulo oru ya Mmepụta lekwasịrị anya “21 Bitcoin Computer” na 2015.
The ike rebranded ka Earn.com ikpeazụ October na a pivot na hụrụ ya ẹkedori a na-elekọta mmadụ na netwọk iji na incentivizing ọrụ mezue ihe aga-eme n'ọnọdụ cryptocurrency ụgwọ ọrụ.
Nke a izu Coinbase mara ọkwa: “Irite emeela a ugwo email ngwaahịa na bụ achọghị ịzụ otu n'ime ndị mbụ bara blockchain ngwa iji nweta uru traction. Anyị ga na-Njọ azụmahịa na-agba ọsọ n'ihi na ọ na-egosi a ọtụtụ nkwa ma nwere.”
Bitcoin dominance ọnụego wɔfrɛ wɔn T 50...
kaadị News 29.10.2018
Previous Post:Germany No. 2 ngwaahịa mgbanwe atụmatụ maka iwebata nke kaadị Trading App
Next Post:Insurance ore Marsh-arụ ọrụ na IBM on Blockchain n'elu ikpo okwu
Ka 8, 2018 na 5:53 PM
October 13, 2018 na 12:53 PM
October 17, 2018 na 8:37 PM
How the Gov Shutdown Affects BTC ETFs + Binance’s Fiat-to-Crypto Strategy – kaadị News